Ferdinand oo ka hadlay eedeynta Terry - BBC Somali
Ferdinand oo ka hadlay eedeynta Terry
14 Sebtembar 2014
Image caption Cayaaryahan Rio Ferdinand
Ciyaaryahan Rio Ferdinand, ayaa sheegaya in John Terry, uusan ka raali bixin muranka cunsuriyada ee u dhexeeya Terry iyo walaalkii Anton Ferdinand. John Terry ayaa lagu eedeeyey in uu cunsurinimo kula kacay Anton cayaarahii horyaalka Ingariiska ee dhacay sanadkii 2011, tartan dhexmaray kooxaha Chelsea iyo QPR.
Mar uu la hadalayey wargeyska the Sun, Rio Ferdinand ayaa sheegay in aysan wada hadlin Terry.
Terry ayaa lagu waayey eedaha ah cunsuriyada, kaddib markii maxkamad la horgeeyey bishii July sanadkii 2012, waloow markii dambe ururka iskutaga cayaaraha Ingariiska ee FA uu ka mamnuucay afar cayaar kuna ganaaxeen lacag dhan £220,000.
Rio Ferdinand oo hadda difaaca uga ciyaara kooxda QPR, ahna 35-jir ayaa waxa uu la cayaari doonaa kooxdii uu horey uga tirsanaan jiray ee Manchester United, waxa uuna sheegay in dhacdadaas ay dhaawacday mustaqbalka walaalkii Anton, waxaana uu intaa ku daray in kiiskii xigay ee maxkamadda ay arkeen fariimo hanjabaadyo dil ah oo loo soo diray.